Binali Yildirim ayaa ka hadlay sanadka 10 sano ee wasaaradda | RayHaber | raillynews
HomeGUUDBinali Yıldırım ayaa qiimeeyay sanadka 10 ee wasaaradda
17 / 12 / 2012 GUUD, Headline, TURKEY
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Binali Yildirim ayaa sheegay in 10 ay ka hartay sanadkii ay wasaaradu haysay isla markaana ay soo gabagabeeyeen mashaariic fara badan, laakiin gaar ahaan horumarka wadooyinka tareenka ayaa isaga aad ugu farxay. Wasiirka Binali Yıldırım wuxuu cadeeyay inay tirtireen raadadkii nus qarniga dayaca ee tareenada ee Marmaray, tareenka xawaaraha dheereeya iyo wadooyinka cusub iyo wadooyinka la cusbooneysiiyay. Si kastaba ha noqotee, sanado badan ayaa la dayacay in wixii la qabtay aysan ku filnayn. Waxaan wali qabnaa howlo badan oo aan qabanno. Waxaan dejinnay yoolalkayaga, waana sii wadaynaa dadaalkeenna joogtada ah annaga oo la kaashanna yoolalkaas
Binali Yıldırım wuxuu cadeeyay in mudadii ay jirtay Wasaaradda, 30 bilyan oo TL loo wareejiyay waaxda tareenka isla markaana ay Wasaaraddu u qoondeysay qayb libaax qeybta tareenka ee miisaaniyada 13.9 ee miisaanka 2013 bilyan ginni.
Yüzde 56 ee miisaaniyadda Wasaaradda waxaa lagu bixin doonaa mashaariicda tareenka. Wadooyinka tareenka waxaa raacaya wadooyinka waaweyn oo leh boqolkiiba 28, isgaarsiinta oo leh boqolkiiba 7, shirkadaha diyaaradaha ee boqolkiiba 5 boqolkiiba iyo maalgashiga waaxda badaha oo leh boqolkiiba 4. Miisaaniyadda waxay sidoo kale ka dhigan tahay in xuquuqda wadooyinka tareenka dib loo soo celiyey, haddiiba mar la wada qaato. Waxaan ku hadlayaa fursad kasta; Waan ku hanweynahay wadada tareenka. Sannadka haray ee 10 wuxuu muujiyey in; Saaxiibbadayda tareennada kamaan xishoonin haba yaraatee. kaliya waxaan qabaa maanta, waxaan soo wareegtay la Turkey mashruuca dhaqaaqi doono mustaqbalka. Waxaan xaqiiqsaneynaa mashruuca qarnigii Marmaray, kaasoo mideyn doona labada qaaradood ee adduunku u arko mid masayr. Waxaan si badbaado leh u dhihi karaa waxaan baabi'inay raadadkii nus qarniga dayaca ee tareenka anagoo sameynayna khadad cusub oo casri ah isla markaana aan dib u cusbooneysiinay wadooyinka Marmaray iyo YHT. 150 waxaa la dhisay sannado kahor weligiisna lama taaban. Waxaan sidoo kale fursad u helnay inaan cusbooneysiinno. ”
Tareenka degdega ah, tareenka oo gaabis ah, natiijada: 41 dhintay
22 Bishii Luulyo 2004, tareenka la yiraahdo Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kaasoo dardar galiyay tareenka u dhexeeya Ankara iyo Istanbul, ayaa ka xumaaday xawaaraha xad dhaafka ah ee agagaarka Pamukova, wuxuuna sababay dhimashada 230 wadarta guud ee rakaabka 41 wuxuuna sababay dhaawaca 80. Shilka kadib, waxaa la fahmay in adeegyada tareenka ee la dadajiyay ay bilaabeen iyada oo aan la haynin kaabayaashii hore ee xawaaraha. Waxaa la go'aamiyay in tareenka galay xawaaraha kiiloomitir ee 132 kiilo mitir ka dib markii saldhigga Mekece iyo isku dheelitirkii taayirrada tareenka kor loo qaaday isla markaana tareenka kor loo qaaday.
Wasiirka Gaadiidka Binali Yıldırım ayaa qiimeeyey Mashruucyada Ankara
Wareegga Dayac-tirka Burburka Tons of Pip Pipes oo loo qaybiyey waddada
Halkaan waxaa ah wasaaradda shaqada sannadlaha ah ee 11 ee Binali Yildirim
Wasiirka Ganacsiga iyo Isgaadhsiinta Mr.
Wasaaradda Gaadiidka Lightiyed waxay qiimeeyeen taageerada Tareenka Xawaaraha Sare ee dhaqaalaha.
Wasiirka Warfaafinta. Qiimeeyayaasha loogu talagalay Gargaarka Garoonka Garoonka
Kocaoğlu ayaa ku qiimeeyay Dhibaatada IZBAN ee Barnaamijka TV-ga
Iridda ugu horreysa ee tareenka IZBAN Cumaovası-Torbalı waxaa sameeyey wasiirka Binali Yıldırım.
Carruurta Yakutiyeli waxay qiimeeynayeen fasaxyada iyagoo baraf-dhiga
Martigelinta waxaa lagu daaweynayaa Sarıkamış
khadadka caadiga ah
Wasiirka Gaadiidka Binali Yıldırım
Tababar ka yimid Yakup Kadri ilaa Karaosmanoglu
Baarlamaanka Ankara ee codsiga codsiyada baarlamaanka
Bursa T1 Tram Line oo leh Dhuumaha Birta